I-BATWOMAN NGOKUMANGALISAYO IGAY EBATMAN IGAZI ELIBI - UMFAZI OLIBHINQA
Ukumelwa Kwabantu Besini Esinye
Izidubedube Zase Capitol
I-DC ayisoloko isenza ngokufanelekileyo nguKate Kane. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi-ubuncinci kwii-DC zeMovie eziManyeneyo zoPhilayo- bazama ukulungisa loo nto ngokuba namaBatwoman aphile njengama-lesbian, uyazi, ngovuyo .
Ngokuqinisekileyo, uBatwoman waphuma ngo-2006, emva koko waba yinkokheli IiComics zoMcuphi ngo-2009, kodwa uKate wayenjalo akazange avunyelwe ukutshata umdla wakhe wexesha elide wothando , Umcuphi uMaggie Sawyer we-GCPD. Ngoku, oku bekusenzeka kuyo yonke iDC's Entsha 52 izihloko-kuba, kuyabonakala ukuba, umtshato = ukufa, okanye into- kodwa yayiyingozi ngakumbi kuBatwoman, kuba eneneni wayenobudlelwane obuzalisekisayo obabubonisa kakuhle uluntu lwe-LGBTQ +. Kungekudala, isihloko siza kusilela ngokupheleleyo, ngenxa yokuba kungekho nxalenye incinci iindaba ezifana nale .
waphuma kowuphi unyaka anastasia
Nangona kunjalo, iDC ibonakala ifika ezingqondweni, kwaye ikubona ukubaluleka kokubona yonke iminyaka, ukumelwa okuhle kobudlelwane be-LGBTQ + kwiDCUAOM entsha, Batman: Igazi elibi . Njengoko ibali lakhe liqhubeka, isini sakhe siphathwa njengaye akukho Dili enkulu .
Kwi Igazi elibi , U-Kate uya kwi-bar ye-gay kunye ne flirts kunye no-Renee Montoya; Uxoxa notata wakhe oxhalabileyo malunga nendlela afuna ngayo ukuba afumane intombazana elungileyo kwaye azinze; Uqhula noDick malunga nendlela okumthathe ngayo ixesha elide ukufumana abafazi, naye. Kwaye ekupheleni kwefilimu, nguye kuphela umlingisi onesiphelo esonwabileyo kubandakanya umdla wothando.
Lowo ngumoya ovuyisayo womoya omtsha emva kwento eyenziwe kumlinganiswa ohlekisayo. Nantsi ithemba lokuba sibona ngakumbi lonyango lomlinganiswa kuyo yonke imbonakalo yakhe kwiihlaya. Ngubani owaziyo? Ukuba Igazi elibi yamkelwe kakuhle, inokukhuthaza iDC ukuba ibuyise iBatwoman kwisihloko sayo!
Ngaba uya kujonga Batman: Igazi elibi ? Sele unayo? Sitshele ukuba ucinga ntoni ngezimvo!
(umfanekiso nge-DC Entertainment)
Umkhosi Womoya Omnye
x-amadoda emthi wosapho
kylo ren and rey amawele
umphathi waseMelika intshebe imfazwe engapheliyo
Idris elba ukufumana isimilo esingathandekiyo
Inkqubo entsha yenqanaba elitsha elibi
Inamba yebhola z bulma ilizwi lomdlali
umphathi waseMelika uvumela abantu ukuba bathandane nabanye